Ho ataon’ny vahiny lavanty ny tanin’ny tantsaha malagasy 7000 ha - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Les propositions d’accord foisonnent il y a 9 jours
engagée dans la promotion de l’éducation pour tous et du développement durable il y a 12 jours
Donner de la joie aux enfants malades il y a 16 jours
Feno 9 taona nizarana ny kanto ny PoetaWebs il y a 17 jours
Les démons du passé comme boulets il y a 17 jours
Ho ataon’ny vahiny lavanty ny tanin’ny tantsaha malagasy 7000 ha
Mamaetraka olana maneranana n'i Madagasikara ity resaka tany tany ity. Iray amin'ireny ity ao Marovoay ty. Mainka moa fa misy resaka voanjo dia vao mainka manahirana ny mandalina azy.
Mahatratra 7000 ha ny totalin’ny velaran-tany ho atao lavanty ny talata ho avy izao. Kaomina ambanivohitra enina ao amin’ny Distrikan’i Marovoay no voakasik’izany: Marovoay Banlieue, Manaratsandry, Ambolomoty, Ankaboka, Anosinalainolona, ary Antanimasaka. Fianakaviana 6 000 no mivelona amin’ny fambolena amin’io velaran-tany io, izany hoe raha misy olona dimy isan-tokantrano, dia tsy latsaky ny olona 30 000 no tandindonin-doza ny fiainan-koaviny rahampitso.
Tombontsoa ho an’iza no ao ambadik’izao lavantin’ny tanim-pokonolona izao?
Ny Société Malgache d'Industrie et d'Agriculture (SOMIA) no hisitraka izany. Izy no nitory ny orin’asam-panjakana FIFABE, izay nolazainy fa naka ny taniny ary nampiasa izany tsy araka ny lalàna efa an-taonany maro. Nandresy teny anivon’ny Fitsarana ambaratonga voalohany eto Mahajanga ny SOMIA ary mbola nahazo fanamafisana fandresena teny anivon’ny Fitsarana ambony eto Mahajanga ihany koa. Nivoaka ary ny didy fa tsy maintsy mandoa onitra mitentina 320 000 000 ariary ny FIFABE. Koa satria moa ity farany orin’asa efa tsy miodina intsony, noho izany dia tsy afaka handoa io volabe io. Ka dia nogiazana avokoa ny fananany ary anisan’izany ireo velaran-tany 7000 ha. Ho atao lavanty izy ireo ny talata 08 desambra 2015 izao eto Mahajanga. Marihina fa fony mbola niodina ny orin’asa FIFABE dia efa nozarazarainy naveriny tamin’ny Fokonolona io velaran-tany io ary rehefa voafari-paritra (morcellement), dia samy naka anjara ny tantsaha ka teo anelanelan’ny taona 1998-2000 no vita ara-dalàna ny taratasin-tanin’ireo rehetra (titre) izay nahazo tamin’izany tany izany : ao ny tanimbary fotsiny, ao ny tany misy trano, ao ny tany fambolena hafa. Miantso vonjy amin’ny manam-pahefana isan’ambaratongany: Manomboka tao Marovoay nandalo teto amin’ny Lehiben’ny Faritra Boeny (androany) sy amin’ireo Lehiben’ny Andrim-panjakana rehetra misy eto amin’ny Firenena ary mifarana any amin’ny Filohan’ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina, ireo tantsaha manodidina ny 30 000 ireo. Nataon’izy ireo an-tontam-boky kely ireo taratasy manamarina ny nahazoany ny tany sy ny filazana ny fandoavany ny vola rehetra tamin’izany, miaraka amin’ny anarana sy sonia an-jantony. Nahazo dika mitovy amin’izay avokoa ireo ambaratongam-pahefana voalaza teo, izay antenain’izy ireo mafy fa hitodika manokana amin’izao loza mitatao aminy izao.
Tsiahivina fa vazaha voanjo fahiny no niasa io velaran-tany io talohan’ny FIFABE ka dimam-polo taona aty aoriana, tonga ny taranany amin’ny alalàn’ny SOMIA, haka indray io tany io amin’ny tantsaha malagasy teraka sy monina ary mivelona ao Marovoay.
Ampahatsiahivina ihany koa fa tafiditra ao anatin’ireo ireo Kaominina enina rehetra ireo ny faritra maromaro iasan’ny tetik’asam-pambolem-bary BVPI (Bassins Versants Périmètres Irrigués)-PURSAPS (Projet d’Urgence pour la Sécurité Alimentaire et la Protection Sociale) izay vatsian’ny Banky iraisam-pirenena vola efa maherin’ny efa-taona izao.
Efa nampahafantatra ny toe-javatra amin’ny vahoaka manerana ny Faritra tamin’ny alalàn’ny haino aman-jery rehetra misy eto an-toerana ihany koa ireo solo-tenan’ny tantsaha (Atoa Rafiliposaona: 032 44 ??????/Rtoa Euphrasie: 032 78 ??????) ankoatra ireo izay lasa niakatra any an-drenivohitra.
HCC : Décision relative à une requête en déchéance du Président - il y a 12 heures
Nouveau cardinal : Mgr Tsarahazana, porte-voix de l’espérance du peuple malgache - il y a 4 jours
CNaPS – FLM : 130 luthériens bénéficient d’une formation sur la protection sociale à Camp Robin - il y a 6 jours
Protection sociale : La CNaPS donne une formation pour les responsables de la FLM à Betroka - il y a 9 jours